सम्पादकलाई चिठी - कान्तिपुर समाचार
भाद्र ३, २०७६
आत्मनिर्भर नीति चाहियो
कुनै बेला भृकुटी कागज कारखानाबाट उत्पादित कागज भारत, चीन र भूटानसम्म निर्यात हुन्थ्यो  । हामीकहाँ उत्पादित खाद्यान्न कोरिया पठाएर सहयोग गरिएको थियो  ।
आधार आवश्यकताको खोजी
गाँस, बास, कपास, औषधि–उपचार, शिक्षा, खानेपानी र सजिला बाटाघाटा जनताका न्यूनतम आवश्यकता हुन्  । यति सानो मुलुकमा तीन–तीनवटा सरकार छन्, तर कसैले सिन्को भाँच्दैनन्  ।
सरकार निरन्तरताको पक्षमा
कान्तिपुरमा सोमबार प्रकाशित कार्टुनले वर्तमानको सत्ता राजनीति बोल्छ  । ‘तान्नोस् ! तान्नोस् ! कुर्सी तपैंकै हो...अर्को चुनावपछि !’ प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेका केपी शर्मा ओलीलाई नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सकी–नसकी घिच्याइरहेका छन्  ।
विश्वविद्यालयको उपकुलपति कस्तो हुनुपर्छ ?
भदौ ५ मा हाम्रा सातवटा विश्वविद्यालयका उपकुलपतिको पदावधि सकिँदैछ  । राजनीतिक भागबन्डाभन्दा बाहिर बसेरका नयाँ जोश र जाँगरका सक्षम व्यक्तिलाई उक्त पदमा नियुक्ति गर्नुको साटो फेरि पनि दलीय भागबन्डाको कसरत सुरु भएको छ  ।
भाद्र २, २०७६
‘राजनीतिको बजार हल्ला’ अर्धसत्य
भदौ १ मा प्रकाशित कृष्ण खनालको लेख भ्रामक लाग्यो  । लेखकले दाबी गरेजस्तो आन्दोलन, स्वस्फुर्त रूपमा नेपालमा आजसम्म भएकै छैन  ।
विद्युतीय सवारी साधन
विद्युतीय सवारी साधनबारे संसारभर नै बहस चलिरहेको छ  । डिजेल–पेट्रोलबाट उब्जिने धुवाँले पूरै विश्वलाई दूषित बनाइरहेको छ  ।
‘कुरा गर्‍यो कुरैको दुःख’ भनेजस्तो पुष्पकमल दाहालको जति कुरा गरे पनि कहिल्यै नटुङ्गिने भयो  । उनी दिनमा जति बोल्छन्, उति नै बोली फेरिरहन्छन्  ।
भाद्र १, २०७६
जनताका सवालको व्यवस्थापन चाहिँ कहिले ?
२०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् स्थापित संवैधानिक राजतन्त्रसहितको संसदीय व्यवस्थाअन्तर्गतको पहिलो आम निर्वाचनमा पनि एउटा पार्टीलाई नेपाली जनताले पूर्ण बहुमत प्रदान गरेका हुन्  ।
न्यायालयमा इमानको खोजी
केही मुद्दामा वास्तविक पीडितले न्याय पाउन नसकेको समाचार अचेल प्रायः पढ्न पाइन्छ  । लाग्छ, समयसँगै न्यायालय पनि फेरिँदै छ  ।
स्मार्ट सिटी केका लागि ?
काठमाडौं उपत्यकामा निर्माण हुने चार वटा स्मार्ट सिटीको समाचारले यो भूगोलको भविष्यबारे सबैलाई चिन्तित तुल्याएको छ  । काठमाडौं उपत्यकामा अहिले नै साइकलसम्म राख्ने ठाउँ छैन  ।
अरुण खोलाको जाम
पूर्व पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत नवलपरासीको अरूण खोलाको पुल जीर्ण भइसकेको थियो, कुनै पनि बेला भत्कन सक्थ्यो  ।
सीके राउतको हाउगुजी
केही दिनयता सीके राउत सप्तरी क्षेत्र नं. १ बाट सांसदको उम्मेदवारमा उठ्दै छन् भन्ने कुराले व्यापक चर्चा पाएको छ  ।